वाणिज्य बैंकहरुको तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट : कुनको अवस्था कस्तो ? – Businesssansar
वाणिज्य बैंकहरुको तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट : कुनको अवस्था कस्तो ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको खुद मुनाफा तेस्रो त्रैमासमा नै तीन अर्ब नाघेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नविल बैंक र नेपाल बैंकको नाफा दुई अर्बमाथि पुगेको छ । यसबाहेक ११ वटा बैंकको नाफा अर्बमाथि रहेको छ । तीन वटा बैंकको नाफा भने गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा घटेको छ । हेरौँ, २८ वटै वाणिज्य बैंकको तेस्रो त्रैमासिक विवरण :
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा तीन अर्ब आठ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४८ दशमलव ६७ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दुई अर्ब सात करोड ४९ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब ५८ करोड चुक्ता पूँजी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले जगेडाकोषमा चार अर्ब ९७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा १३ दशमलव ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी एक खर्ब ५३ अर्ब २२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जामा १० दशमलव ८९ प्रतिशतले वृद्धि गरी एक खर्व १२ अर्ब ८० करोड ७९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी ३२ दशमलव ५४ प्रतिशतले बढेर छ अर्ब १९ करोड २ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा ७३ दशलमव ३८ प्रतिशत बढेर तीन अर्ब १४ करोड एक लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा एक अर्ब छ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा एक अर्ब २४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको निष्कृय कर्जा शुन्य दशमलव दुई प्रतिशतले बढेर दुई दशमलव ९० प्रतिशत पुगेको छ भने जोखिमयुक्त सम्पत्ति शुन्य दशमलव ८७ प्रतिशतले बढेर १२ दशमलव ३४ प्रतिशत पुगेको छ ।
नबिल बैंक लिमिटेड
नबिल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा दुई अर्ब ७९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चार दशमलव ३१ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नविलले दुई अर्ब ६८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब चार करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा आठ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा पाँच दशमलव ०१ प्रतिशत वृद्धि गरी एक १ खर्ब २३ अर्ब एक करोड ९४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जामा १५ दशमलव ९८ प्रतिशतले वृद्धि गरी एक खर्ब पाँच अर्ब २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी १० प्रतिशतले बढेर चार अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा तीन दशमलव १७ प्रतिशतले बढेर चार अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा दुई लाख रुपैयाँ मात्रै खराबकर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा २६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (वार्षिक) ४६ दशमलव ८३ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात (वार्षिक) २१ दशमलव १२ गुणा, तरलता अनुपात २४ दशमलव २४ प्रतिशत र प्रतिसेयर नेटवर्थ दुई सय १० रुपैयाँ, निष्कृय कर्जातर्फ एक दशमलव ०७ प्रतिशत र जोखिमयुक्त सम्पति १३ दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको छ ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एक अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ दशमलव ५६ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कृषि विकास बैंकले एक अर्ब ५७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
१३ अर्ब ९३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा नौ अर्ब ६४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा ९७ अर्ब १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जामा छ दशमलव ८१ प्रतिशतले वृद्धि गरी ९४ अर्ब ८९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी १६ दशमलव ३८ प्रतिशतले घटेर चार अर्ब ३० करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा ६४ प्रतिशतले घटेर ६४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा एक अर्ब ८० करोड ५४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ राइट ब्याक गरेको बैंकले प्रोभिजनमा एक अर्ब ८८ करोड ९९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको पुँजीकोष २० दशमलव ७६ प्रतिशत, निष्कृय कर्जा ३ दशमलव ४९ प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी २४ दशमलव २० रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात १३ दशमलव ८८ गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ २ सय १० दशमलव ५३ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २३ दशमलव ०१ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी १३ दशमलव २८ प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब १० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा ४४ दशमलव ५२ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगे्को छ । यो अवधिमा ३४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खराबकर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको पूँजीकोष अनुपात १४ दशमलव ३९ प्रतिशत, निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १५ दशमलव ४१ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानीको अनुपात १५ दशलमव ८४ गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय ३० दशमलव ११ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २४ दशमल ३८ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रभु बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ८६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४० दशमलव ०३ प्रतिशत कम नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा प्रभुले एक अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा तीन अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राखेको छ । बैंकले निक्षेपमा २२ दशमलव ४० प्रतिशतले वृद्धि गरि ८७ अर्ब ६४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जातर्फ २२.६१ प्रतिशत वृद्धि गरी ७३ करोड सात लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी दुई दशमलव ५२ प्रतिशतले घटेर एक अर्ब ९० करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा १७ दशमलव ५५ प्रतिशतले घटेर ९६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा ७५ करोड ७४ लाख १२ हजार रुपैयाँ खराबकर्जा उठाएको बैंकको प्रोभिजन ३४ करोड ३९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ नेगेटिभमा रहेको छ ।
बैंकको निष्कृय कर्जा तीन दशमलव ९ प्रतिशत, जोखिमयुक्त सम्पत्ति १२ दशमलव ६८ प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी १४ दशमलव ४५ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात १५ दशमलव २२ गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ १४२ दशमलव ५२ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २३ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड
नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ७१ करोड तीन लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४ दशमलव १७ प्रतिशत कम नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एनबिले ८२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब आठ करोड ८१ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा तीन अर्ब छ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा ४२ अर्ब ३६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले कर्जामा ४२ अर्ब सात करोड ५६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेकोे छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकले ३८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेके थियो ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी १४ दशमलव ६० प्रतिशतले बढेर एक अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा १० दशमलव ५९ प्रतिशतले घटेर ९८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा नौ करोड ९६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा ३८ करोड ५३ लाख ४६ ह जार रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (वार्षिक) १२ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीेको अनुपात (वार्षिक) २० गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ १३८ रुपैयाँ, तरलता अनुपात २८ दशमलव १५ प्रतिशत, जोखिमयुक्त सम्पति १४ दशमलव १५ प्रतिशत र निष्कृय कर्जा एक दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको छ ।
माछापूच्छ्रे बैंकको लिमिटेड
माछापूच्छ्रे बैंकको लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ दशमलव ९० प्रतिशत कम नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा माछापूच्छ्रेले एक अर्ब ५१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
आठ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको माछापुच्छे« बैंकले जगेडाकोषमा एक अर्ब ७९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । बैंकले निक्षेपमा ६८ अर्ब ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँ संकलन गरी कर्जा तर्फ ६२ अर्ब २१ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी एक दशमलव ७७ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ७८ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा नौ दशमलव ०१ प्रतिशतले घटेर एक अर्ब २१ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा छ करोड ८० लाख ७२ हजार रुपैयाँ राइट ब्याक गरेको बैंकले प्रोभिजनमा १८ करोड ४४ लाख ११ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको जोखिमयुक्त सम्पति १५ दशमलव ७२ प्रतिशत, निष्कृय कर्जा शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी १३ दशमलव ७५ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात १६ दशमलव ४४ गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ एक सय २२ दशमलव २६ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २२ दशमल ३७ प्रतिशत रहेको छ ।
कुमारी बैंक लिमिटडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ७० करोड ५६ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८७ दशमलव ७३ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कुमारीले ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
पाँच अर्ब ९६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा दुई अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राखेको छ । बैंकले निक्षेपमा ६१ अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेर कर्जामा ५६ अर्ब ८४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी ६४ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ३४ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा ६७ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेर ८५ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा २२ करोड ३८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा १६ करोड ९० लाख ८१ ह जार रुपैयाँ राखेको छ ।
कुमारी बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १५ दशमलव ७६ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात १५ दशमलव ८६ गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ एक सय ४७ दशमलव ११ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २२ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, बैंकको निष्कृय कर्जा एक दशमलव २४ प्रतिशत र जोखिमयुक्त सम्पत्ति १४ दशमलव ०९ प्रतिशत रहेको छ ।
एनसिसि बैङ्क लिमिटेड
एनसिसि बैङ्क लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ५४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तीन गुणा बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।
चार अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको बैंकले जगेडा कोषमा तीन अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राखेको छ । सोही अवधीमा बैंकले ५९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरि ५२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
बैंकको संचालन मुनाफा चार गुणाले बढेर ३४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने खुद व्याज आम्दानी ३४ प्रतिशतले घटेर एक अर्ब पुगेको छ । बैंकले तेस्रो त्रैमासमा ४४ करोड रुपैयाँ खराब कर्जा उठाउन सफल भएको छ । बैङ्कको निष्कृय कर्जा तीन दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ ।
मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ५२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ८ करोड ११ लाख कमाएकोमा दोस्रोमा पुग्दा ३९ करोड ३६ लाख मुनाफा पुगेको थियो ।
बैंकको संचालन मुनाफा १ अर्ब ४ करोड रुपैँया पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा मेगा बैंकको संचालन मुनाफा ६८ करोड १९ लाखबाट बढेर १ अर्ब ४ करोड पुगेको हो । जुन ५२ दशमलव ९७ प्रतिशतको वृद्धि हो । कुल संचालन आम्दानी ५३ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको मेगा बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी, दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा तेस्रो त्रैमासिकमा खुद ब्याज आम्दानी ५३ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेको छ । खुद ब्याज आम्दानी दोस्रोमा ८४ करोड ६३ लाख रहेकोमा तेस्रो त्रैमासिकमा १ अर्ब ३० करोड पुगेको हो ।
सिभिल बैंक लिमिटेड
सिभिल बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ३५ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२६ दशमलव ६४ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सिभिलले १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आमर्जन गरेको थियो ।
छ अर्ब ९३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैंकले जगेडाकोषमा एक अर्ब ९० करोड ८८ लाख रुपैयाँ राखेको छ । बैंकले निक्षेपमा ३६ अर्ब ९० करोड ६३ लाख रुपैयाँको संकलन गरी कर्जा ३४ अर्ब ९२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी २१ दशमलव ६९ प्रतिशतले बढेर ८९ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफ ४८० प्रतिशतले बढेर १७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा उठाएको बैंकले प्रोभिजनमा ४४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राखेको छ ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी आठ दशमलव ९१ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी १६ दशमलव ९५ गुणा, प्रतिसेयर नेटवर्थ एक सय ६७ दशमलव २४ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २५ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, बैंकको निष्कृय कर्जा तीन दशमलव ७४ प्रतिशत र जोखिमयुक्त सम्पति २१ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ ।
मंगलबार पनि घट्यो सेयर बजार, कारोबार १५ करोड पनि पुगेन